hudheelada - ALinks
Hoteellada ku yaal Key West
Key West waa jasiirad ku taal silsiladaha Florida oo sidoo kale loo yaqaan 'Southmost Point' ee Mareykanka. Key West waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loo dalxiis tago Mareykanka. Waa mid ka mid ah magaalooyinka helay
Fiiri hudheelada Louisiana ee New Orleans
Louisiana waxay leedahay liis dheer oo hoteellada ugu wanaagsan. Maaddaama ay hoyga u ahayd qaar ka mid ah huteellada ugu horreeya qaaradda ee Mareykanka. Xitaa maanta waxay leedahay dhaxal isku mid ah oo ah bixinta soo dhaweyn tayo sare leh. Kaliya maahan meelaha ugu sarreeya ee
Hoteellada ugu Fiican San Diego
June 23, 2020 Maitri Jha hotels, safarka
San Diego waa magaalo ku taal gobolka Kalifoorniya ee Mareykanka. Magaalada sidoo kale waxay kasbatay magaca magaalada xeebta California. San Diego waa mid ka mid ah meelaha yar yar ee aadka loogu jecel yahay meelaha loo dalxiis tago. Ku